Afrika:- Macdanta Koobalt Oo Qiimo Beeshay Shiinaha Oo Bakhaaro Ka Buuxsaday |
Afrika:- Macdanta Koobalt Oo Qiimo Beeshay Shiinaha Oo Bakhaaro Ka Buuxsaday
Macdanta Koobalt ayaa ka mid ah macdanta saameynta weyn ku yeeshay dunida aan haatan ku nool nahay.
Taariikh ahaan waxaa markii hore macdantani loo isticmaali jiray in midab loogu yeelo muraayadaha iyo waxyaabaha kale dhoobada ka sameysan. Masaarida ayaa macdantani Koobalt isticmaali jiray 2,600 oo sano ka hor.
Balse qarnigi 20-aad ayaa la ogaaday in macdantani ay muhiim u tahay tiknoolajiyadda casriga ahi.
Macdantani ayaa hadda laga sameeyaa qeybo ka mid ah matoorka diyaaradaha iyo qalabka biraha lagu jaro.
Arrintaasi ayaa macdantani muhiim ka dhigtay balse waxa u fududeeyay shirkadaha maalgashiga ayaa ah in macdantani laga sameeyo batariga la dabayn karo ee maanta dunida laga isticmaalo.
Sidaa awgeed ayay shirkadahani macdantan ku tilmaameen “dahaka baluugga ahi”.
Laga soo billaabo sanadkii 2008, waxaa aad usii kordhay baahida loo qabo taleefoonnada casriga ahi oo u baahan batari si dhakhsa ah loo dabeyn karo.
Muddo haatan laga joogo afar sano ka hor, waxaa isticmaalka macdantani sii kordhiyay baabuurta casriga ah ee korontada ku shaqeeya.
Laga billaabo sanadkii 2016 ilaa 2018, waxaa cirka isku sii shareeray qiimaha macdantani Koobalt waxaana halkii tan uu gaaray 90 kun oo doolar halka markii hore uu ka ahaa 26 kun oo doolar.
Inkabadan 50% baahida haatan loo qabo macdantan ayaa ku saleysan batariga laga sameeyo halka waddamada reer Yurub iyo Mareykanka macdantani aad loogu isticmaalo muraayadaha.
Haseyeeshe sanadkii la soo dhafaay waxaa hoos u dhacay qiimaha suuqyada caalamka lagu kala iibsado macdantani.
Usbuucan ayaa shirkadda macdanta ka shaqeysa ee Glencore waxa ay albaabda isugu dhufatay oo ay xirtay goob macdanta Koobalt laga qodo oo lagu magacaabo Mutanda oo ku taal dalka Jamhuuriyadda Dimuquraadiga ee Congo, waxaana ay sheegtay in macdantaasi ay haatan qiimo beeshay.
Arrintaasi ayaa waxaa sabab looga dhigay shirkadaha qaar oo billaabay in ay keydsadaan macdantan si marka uu sicirkeeda isbadalo ay macaash uga helaan.
Waxaa kale oo haatan hoos usii dhacaya baabuurta korontada ku shaqeeya.
Arrinta kale ayaa waxa ay tahay warshadihii farsameyn jiray macdantan gaar ahaanna kuwa ku yaal qaaradda Afrika iyo dalka Shiinaha ayaa keydsanaya macdantani iyaga oo ka rajo qaba in mustaqbalka ay ka macaashaan.
Warshadahani ayaa billaabay in suuqyada ay ku sii daayaan macdantii muddada ay keydsanayeen ka dib markii la ogaaday in ay haatan yaraadeen baabuurtii korontada ku shaqeynayay.
Inkabadan 60% macdanta Koobalt ee dunida laga isticmaalo ayaa waxaa laga keenaa dalka Jamhuuriyadda Dimuquraadiga ee Congo, oo sida la sheega macdantani uu u yahay sida shidaalka dalka Sucuudiga.
Balse khubarada ayaa sheegaya in ay adag tahay in lagu dhex ganacsado dhalkaasi Congo.
Inkastoo dalkaaasi doorasho dimuquraadi ahi ay ka dhacday bishii Diseembar ee sanadkii la soo dhaafay, haddana xaaladda siyaasadeed ee dalkaasi ayaa ah mid marnaba aan la saadaalin karin.
Laba bilood ka hor, in kabadan 40 qof oo si sharci darro ah uga shaqeynayay goob macdanta laga qodo oo ay leedahay shirkadda Glencore ayaa dhintay ka dib markii ay ku dumeen godadkii laga qodayay macdantani.
Hay’adda Unicef ayaa sheegtay in qiyaastii 40,000 oo carruur ah ay ka shaqeyaan guud ahaan dalka Congo.
Hay’adda xaquuqul insaanka ee Amnesty waxa ay shirkadaha Apple, Samsung iyo Sony ay ku eedeysay in ay ku guuldareysteen in ay xaqiijiyaan in carruurtu aysan ka mid noqon shaqaalahooda. Haseyeeshe shirkadahani ayaa arrintaasi beeniyay.
Inakstoo shirkadaha sameeya taleefoonada lagu dhaliilay arrintaasi, nasiib wanaag waxaa eedeymahaasi ka badbaaday shirkadaha sameeya baabuurta.